Militariga Suudaan oo lagu eedeeyey inay weerareen xafiisyada mucaaradka – Radio Daljir
Militariga Suudaan oo lagu eedeeyey inay weerareen xafiisyada mucaaradka
Juunyo 30, 2019 7:03 b 0
Xisbiga ugu wayn ee muacaaradka dalka Suudaan ayaa sheegay ciidamada ammaanka inay soo weerareen xafiiskooda, ayna xanibaad kusoo rogeen shir jaraa’id oo uu xisbigu doonayay inuu uga hadlo dibadbaxyada waawayn ee looga soo horjeedo xukunka militariga.
Xisbiga” dibadbaxa milyanka ee xoogan” waa xisbi mucaarad ah oo golaha militariga ku cadaadinaya inay xukunka ku wareejiyaan rayidka, kadib xil kadagistii Cumar Xasan Al-Bashiir.
Daladda xirfadyahanada Suudaan ee (PSA) ayaa ku sheegay bartooda Tweetka, inay cambaaraynayaan hab dhaqankan xun, sida lagu yiri qoraalka.
Waxaa lagu wadaa dibadbaxyada inay kasii socdaan dalka Suudaan maanta oo Axad ah.
Daladda SPA ee Suudaan ayaa soo qabanqaabisay shir saxaafadeed kooban, oo ay ugu baaqayaan shacabku inay dibadbaxyo waawayn dhigaan markii u horaysay tan iyo markii militariga uu dad badan ku dilay dibadbaxyadii kadhacay dalkaasi ee lagu taageerayay dimuqraadiydda June, 3.
Madaxweyne Trump iyo Kim Jong-ung oo maanta ku kulmaya xadka labada Kuuriya